प्रधानमन्त्रीलाई एक्कासि कुनै जटिलता नथपिए एक–दुई दिनमै डिस्चार्ज गरिने | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
प्रकाशित मिति १९ मंसिर २०७६, बिहीबार ०७:४५ लेखक nepali janta
काठमाडौँ । उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई एक-दुई दिनमै अस्पतालबाट डिस्चार्ज गरिने जनाएका छन् । प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यमा राम्रो सुधार आइरहेको र यस्तै सुधार जारी रहे डिस्चार्ज गर्न सकिने उनीहरूले जनाएका हुन् ।
‘सुधारको स्थिति यस्तै कायम रहे र एक्कासि कुनै जटिलता नथपिए, प्रधानमन्त्रीलाई छिट्टै डिस्चार्ज गरिनेछ’, उपचारमा संलग्न एक चिकित्सकले भने ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई ९ दिनअघि ‘एपेन्डिसाइटिस’ सहित पेरिटोनाइटिस (पेटको संक्रमण) समेत भएपछि मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा भर्ना गरी आकस्मिक शल्यक्रिया गरिएको थियो । शल्यक्रियापछि उनलाई आईसीयूमा राखिएको छ । उनलाई शनिबार र आइतबार दुईपटक डायलसिस गरिएको थियो । प्रधानमन्त्रीलाई डिस्चार्ज गर्नुअघि डायलसिस गरिने जानकारी ती चिकित्सकले दिए । ‘अब प्रधानमन्त्रीलाई घरमै आराम गर्दा पनि त्यति अप्ठ्यारो हुनेछैन,’ ती चिकित्सकले भने ।
उनका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीको शल्यक्रिया गरिएको ठाउँमा भएको घाउ निको हुने क्रममा छ । आईसीयूमा प्रधानमन्त्रीले राम्ररी कुराकानी गर्नुका साथै नरम (गिलो) आहारसमेत सेवन गरिरहेका छन् । उनले लिने नरम आहार बिस्तारै सामान्य आहारजस्तै भइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको शल्यक्रिया गरेका डा. रमेशसिंह भण्डारीले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमा ओलीले अब करिब १० दिन जतिमा कसैको सहयोगमा कुरा गर्ने, अन्तर्वार्ता दिने आदि गर्न सक्ने बताएका थिए । सन् २००७ मा दिल्लीस्थित इन्द्रप्रस्थ अपोलो अस्पतालमा ६७ वर्षीय प्रधानमन्त्री ओलीको मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिएको थियो । हाल उनको दोस्रोपटक मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि तयारी गरिँदै छ ।
सरकारका काम अलोकप्रिय बने : माधव नेपाल
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले सरकारका कामकारवाही अलोकपि्रय बन्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्…
छाला फुस्रो हुन नदिन यसो गर्नुहोस्
एजेन्सी । मह छालाका लागि निकै नै उपयोगी चिज हो । मह र दहीको प्याक बनाएर पूरै शरीरमा लगाउने…
बिरामीलाई बेवास्ता गर्ने चिकित्सकविरुद्ध उजुरी
काठमाडौं । बिरामीका लागि चिकित्सक देवता हुन् । चिकित्सकले राम्रोसँग बोलिदिए र राम्रो व्यवहार गरिदिए बिरामीको मनोबल झन बड्छ,…
विमस्टेकमा बहुपक्षीय ऊर्जा सम्झौताको तयारी
काठमाडौं । बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास ९विमस्टेक० को चौथो शिखर सम्मेलनमा बहुपक्षीय ऊर्जा सम्झौताको…
काठमाडौं । खानेपानीमन्त्री बिना मगरले बाग्मती नदीमा कञ्चन पानी बग्ने गरि ललितपुरको बालकुमारीस्थित धोबिघाट फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्रको शिलान्यास…
पश्चिम सेती आयोजना लगानीका लागि अयोग्य !
काठमाडौं । चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल सीटीजीआईले पश्चिम सेतीलाई लगानी अयोग्य भन्दै आयोजनाबाट बाहिरिने संकेत दिएको छ । ६…
डियर कमरेड से नो टु एमसीसी 66 views